Ndiphuma njani kwiWebhu yeTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndiphuma njani kwiWebhu yeTelegram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 412
Uneendlela ezininzi zokufikelela kwiTelegram yesicelo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza kwaye enye yezona zinto zinomdla kakhulu yikhompyuter yethu. Namhlanje sifuna ukukuxelela kancinci malunga neWebhu yeTelegram kunye nendlela elula yokuphuma kule nguqulo.
IWebhu yeTelegram yinguqulelo yesikhangeli yenkonzo yemiyalezo ekhawulezileyo. Okwangoku, abantu abaninzi basebenzisa le ndlela ukunxibelelana nabahlobo babo kunye neentsapho. Ukuba ungene kwiWebhu yeTelegram kwaye awukwazi ukuyivala, nikela ingqalelo kwezi ngcebiso zilandelayo.
Yintoni iWebhu yeTelegram?
Ngaba ukhe weva ngale nguqulelo inomdla yeTelegram? Esi sisixhobo esihle kakhulu esibonelelwa ngenkonzo yemiyalezo kwangoko kubo bonke abasebenzisi bayo. Abantu abasafuni ukuba iselfowuni ingene kwiakhawunti yabo. Ngoku banokuyenza ukusuka kuhlobo lwesikhangeli.
Eyona nto ilunge kakhulu yile akukho sidingo sokukhuphela nayiphi na inkqubo okanye ufake nasiphi na isicelo kwikhompyuter yethu. Unokhetho lokungena ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeTelegram. Kule nguqulo unokwenza yonke into oyenzayo kwisicelo esiphathwayo.
Phuma kwiWebhu yeTelegram kwikhompyuter yakho
Ungangena kwiWebhu yeTelegram kuso nasiphi na isikhangeli oyifakileyo nokuba yeyikhompyuter yakho okanye nakwiselfowuni ngokwakho. Apha sichaza eyona ndlela ilula yokuphuma kweli qonga kwikhompyuter yakho.
Ukuba ufuna ukuphuma kwiTelegram yeWebhu kwikhompyuter yakho Kuya kufuneka ulandele uthotho lwamanyathelo anokukukhokelela ekufikeleleni kwinjongo:
Kwindawo yokuqala iya kuba vula isikhangeli kwikhompyuter yakho kunye nokufikelela kuhlobo lweTelegram yeWebhu
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwiakhawunti yakho kufuneka Cinezela kwi icon yemigca emithathu ethe tye ezibonakala phezulu ngasekhohlo kwesikrini.
Ngoku cofa ukhetho "ulungiselelo"
Khetha apho ithi "Phuma”Ukuqinisekisa ukuba ufuna ukuvala iseshoni yeWebhu yeTelegram
Ilungile. Iseshoni ebendiyivulile kwiWebhu yeTelegram ivaliwe ngempumelelo. Ngoku ukuba ufuna ukungena kwakhona kuya kufuneka ubonise inombolo yakho yefowuni kwaye isicelo siyakuthumela ikhowudi yokuqinisekisa ukufikelela kwakho.
Phuma kwiifowuni eziphathwayo
Kuyenzeka ukuba ungene kwiTelegram yeWebhu kwiifowuni eziphathwayo. Into ekufuneka siyenzile kukuvula isikhangeli esisifakileyo kwisixhobo kwaye singene kwiphepha lewebhu lenkonzo yokuthumela imiyalezo kwangoko.
Ukuba ungene kwiWebhu yeTelegram kwaye ufuna ukuyivala kwiselfowuni Kuya kufuneka ulandele la manyathelo esiwabonisa apha ngezantsi:
Vula isikhangeli oqhele ukusisebenzisa, umzekelo uChannel.
Ukufikelela kwiWebhu yeWebhu
Cinezela kwimigca emithathu ethe tye ukufikelela kwimenyu
Ngoku kufuneka ucofe ukhetho "kuphuma”Ukuqinisekisa ukuba ufuna ukuvala iseshoni yakho kwiTelegram yeWebhu
Umuy Bien. Ixesha lakho livaliwe ngempumelelo
Ukuba ufuna ukungena kwakhona kwiWebhu yeTelegram Kuya kufuneka uvule isikhangeli kwiselfowuni kwaye ulandele amanyathelo aboniswe yinkqubo, kubandakanya ukufaka inombolo yakho yefowuni ukuqinisekisa ukufikelela.
1 Yintoni iWebhu yeTelegram?
2 Phuma kwiWebhu yeTelegram kwikhompyuter yakho
3 Phuma kwiifowuni eziphathwayo
Ndifuna + abalandeli kwi-twitter
Ngaba kunokwenzeka ukuba iakhawunti ye-telegram?